Njani igqwetha elingu-NJ Bankruptcy elinokuthi lifake isaphulelo se-13 sokugcina imali kwi-NJ ukushiywa ngenxa yokuxelwa kwangaphambili kwe-NJ yeRhafu yokuThunyelwa kweNtshukumo nge-intshukumo engama-547 yokuphelisa ukuqhutywa kokhetho. - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa koKhuselo kunye namaGqwetha abaGqithisi
ikhaya / Blog / Ukuchithwa / Njani igqwetha elingu-NJ Bankruptcy elinokuthi lifake isaphulelo se-13 sokugcina imali kwi-NJ ukushiywa ngenxa yokuxelwa kwangaphambili kwe-NJ yeRhafu yokuThunyelwa kweNtshukumo nge-intshukumo engama-547 yokuphelisa ukuqhutywa kokhetho.
Disemba 30, 2019 Ukuchithwa, New Bankruptcy, Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoI-Veer Patel
Unga gcina ikhaya lakho emva kokubhencwa kwerhafu ye-NJ ngetyala lokusebenzisa i-Bankruptcy isigwebo sokugqibela ngokuvumela igqwetha le-NJ Bankruptcy kuPatel, uSoltis, kunye noCardenas bafaka ifayile kwisahluko se-13 sokungabinamali kwaye inefayile yetrasti. 11 usc 547 Isindululo sokuphepha ukudluliselwa okukhethwayo ukuba umgwebo wokugqibela wakutsha nje.
Iiofisi zomthetho zePatel Soltis kunye neCardenas zigxile ekusindiseni amakhaya abantu. Enye yezixhobo esizisebenzisayo kukungasebenzi kakuhle. Sifaka ifayile yesahluko sesi-7, se-13, nesahluko se-11 kubhengezo lwamatyala eNew York naseNew York. Ke, nokuba uhlala eNew York, kodwa ulahlekelwe yipropathi eNew Jersey ukusuka ekuchazwe kwiRhafu liTyala sinokunceda. Sineegqwetha ezisebenza e-New York naseNew Jersey.
Omnye wemibuzo esiyifumana apha: Ndilahlekelwe yindlu yam kwindawo ekuboniswa kuyo irhafu ngaphambili Ndingenza ntoni kakuhle?
Kukho amathuba okusebenzisa ukungabinamali. A Isahluko 13 ukubhengezwa ukubekwa ngqo. Ukuze ube nakho ukurhola ipropathi uyibuyisele kwisahluko 13 sokurhafisa. Nokuba umgwebo wokugqibela kwisatifikethi setyala lerhafu usayiniwe ngumgwebi. Ukuba umgwebo wawungaphakathi kwiintsuku ezingama-90 ezidlulileyo, kukho intshukumo ye-11 usc 547 yokudluliselwa kukhetho okwaziyo ukubuyisa ipropathi.
Nangona ukubonwa kwangaphambili kungengobuchwephesha ubuqhetseba ngokudlulisela imali kwi-trustee inokuphinda ibuyise ipropathi ukuqinisekisa ukuba bonke abanikiweyo bayabhatalwa kwaye ayisiyo kuphela isiqinisekiso sokuhlawula irhafu. Umnini weSiqinisekiso seTyala seTyala nguyena kuphela umntu obolekayo Ukuchazwa kwerhafu yokuhlawulwa kwamatyala iNew Jersey. Umnini wephepha-mvume lokuhlawulwa kwamatyala elitsha iJersey uthathe konke ukulingana kwakho. Ifumene yonke imali yakho engenziwayo ekhayeni lakho ngokuhlawula irhafu yakho edlulileyo kwiminyaka emibini. Uphulukene nobomi bexesha lomsebenzi. Oku akulunganga.
Njengomzekelo, masithi lo mhlaba uxabisa isigidi seedola. Umnini werhafu uNi wabeka i-100,000 yeedola kuyo ngokuhlawula irhafu iminyaka emibini. Ngoku banepropathi yakho emva kokubhengeza kwaye bafumana i-900,000, 900 yeedola ngokulingana. Ukubuya kwe-900,000% kutyalo-mali kuvakala kamnandi, ngaphandle kokuba ungumntu ophulukene ne- $ 13 yokulingana. Bonke abanye obabolekisi bakho nabo basele baphethe ingxowa. Abakhange bahlawulwe, kwaye bayakuvuyela ukuthengisa ikhaya lakho kwimarike evulekileyo ukuze nabo bahlawulwe. Akukho nto banokubonisa ngayo ukuboniswa kwetyala le-New Jersey, ngoko ke isahluko se-7 okanye secandelo XNUMX sokugcina amatrasti angaphuma ayokufumana ipropathi yakhe ukuba ayibuyisele kwilifa lokubhanga. Umgcini webhanki olawula ukungabinamali unokuyithengisa ipropathi emva koko asasaze ingeniso.
Okoku kukunika ithuba lokuba ngeloxesha ukonga indlu uhlawule bonke obabolekayo. Ke olu luhlobo lokuqhatha ngobuqili. Asincomi abantu bazame ngokwabo. Ukuba uzibona ukule meko. Ndiyathemba ukuba uthetha negqwetha ngaphambi komgwebo wokugqibela we-NJ tax lien.
Nangona kunjalo, ukuba kukho into engahambanga kakuhle, thetha negqwetha, ayifanelanga ukuba thina. Fumana umntu okuqondayo ukubhengezwa nokuba angarhola njani na kwipropathi yakhe emva kokubhengezwa kwirhafu. Ungasitsalela umnxeba ku 973-200-1111 okanye i-imeyile yethu [Imeyile ikhuselwe].